बच्चा चोर्ने मनसायले ‘बेबी सावर’को निहुँ पारेर गर्भवती साथीको हत्या, पेट काटेर निकालिन् बच्चा !
मंगलबार ६-६-२०७७/Tuesday 09-22-2020/	11:44 pm
घटनामा प्रयोग भएको धारिलो चक्कु । तस्विरः डेली मेल
एजेन्सी । ‘गर्भवती महिलाको हत्या’, यी वाक्य सुन्दा मात्रै पनि आङ सिरिङ्ग भएर आउँन सक्छ । सम्भवतः यो नै अपराधको सबैभन्दा भयानक रुप हुनसक्छ कि एउटी साथीले आफ्नी गर्भवती साथीको हत्या गरी पेट काटेर उनको बच्चा चोर्छिन् ।
घटना ब्राजिलको हो । गत साता एक युवा गर्भवती महिला उनको पेटबाट काटेर निकालिएको बच्चाका साथ मृत फेला परिन् । बच्चा चोर्ने ‘अब्सेसिभ डिस्अर्डर’(असाधारण इच्छा/एक प्रकारको मानसिक असन्तुलन) भएकी एक उनकी साथीले ‘बेबी सावर’ गराउँने निहुँमा उनको हत्या गरेको पाइएको जनाइएको छ ।
डेली मेलको रिपोर्टअनुसार, २४ वर्षीया फ्लाभिया गोडिन्हो मफ्रा नामक ती महिला ३६ हप्ताको गर्भवती थिइन् । उनको दक्षिणी ब्राजिलको सान्टा क्याटरिना राज्यको क्यानेलिन्हा सहरमा हत्या गरिएको छ ।
स्कूल पढ्दाकी एक साथीले बेबी सावरको झुटो समारोह आयोजना गरेर उनलाई इँटाले प्रहार गरेर हत्या गरेको स्विकार गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
गर्भवती फ्लाभिया र उनका श्रीमान ।
हत्या आरोपी ती महिलाको गत वर्ष गर्भपतन भएपछि आफूमा चोर्ने असाधारण इच्छाबाट ग्रसित रहेको स्विकार गरेको प्रहरीले बताएको छ । २४ वर्षीया फ्लाभियाको धारिलो हतियारले पेट काटिएको र इँटा हानिएका कारण मृत्यु भएको यस मुद्दाको गुप्तचर अधिकारी पाउलो एलेक्जेन्ड्रे फ्रिएस्लेबिन ई सिल्भाले पुष्टि गरेको ब्राजिलको राष्ट्रिय पत्रिका जिवानले जनाएको छ ।
गत शुक्रबार बिहान ९ बजे मात्रै उक्त महिलाको शव उनका श्रीमान र आमाले भेटेका थिए । उनको शवलाई नजिकैको झाडीमा फालिएको थियो भने उनको बच्चा साथमा थिएन ।
आरोपी महिला र उनको श्रीमानले बच्चालाई अस्पताल पुर्याएको केही दिनपछि प्रहरीले पत्ता लगायो र दुवैलाई पक्राउ गर्यो । प्रहरी अनुसन्धान अनुसार, हत्या गरिएकी महिला आरोपी महिलाको स्कूल पढ्दाकी साथी थिइन् ।
आमाको पेट काटेर निकाएको शिशुलाई फ्लोरिन्पोलिस बाल अस्पतालमा राखिएको छ र उनलाई आमाको कोखबाट जबरजस्ती निकालिएका कारण पर्न गएको चोटका लागि उपचार भइरहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
उक्त नाबालिकालाई आमाको मृत्यु भइसकेपछि निकालिएको थियो वा जीवितै रहँदा निकालियो भन्नेबारे अटोस्कोपी परीक्षणले पुष्टि गर्नेछ । शिक्षिका पेशामा आवद्ध फ्लाभियाको क्यानेलिन्हामा अन्तिम संस्कार गरिएको छ ।
बुधबार १७ भदौ, २०७७ २०:५२:०० मा प्रकाशित
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई कांग्रेस सांसदको प्रश्नः को को मन्त्री फेल भए ?
प्रदेश पाँचमा कृषि क्षेत्रमा करोडौंका कार्यक्रम अगाडी बढाइंदै
सिन्धुपाल्चोक र बाग्लुङलाई विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर पुनर्निमाण गर्ने सरकारको निर्णय
विश्वसामु आइपिएल प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा पुर्‍याउनेे डडेल्धुराका हर्कबहादुरको कथा
मालीमा सैनिक प्रमुख उपराष्ट्र हुने तयारीमा, विपक्षीको विरोध जारी
लकडाउनका कारण अफ्रिकामा गैंडाको चोरी तस्करी घट्यो
चितवनका कोरोना संक्रमितको शव देवघाटमा व्यवस्थापन